ခြေအိတ်အမှတ်အသားကနေပြောတဲ့ ကျန်းမာရေးပြသာနာ၄မျိုး - MyMedia
My Health ပရိတ်သတ်များအားလုံး မဂ်လာပါနော်။ တစ်ခါတလေ ခြေအိတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာ သင့်ခြေထောက်မှာ အမှတ်အသားကျန်နေခဲ့တာမျိုးကို သတိထားမိဖူးပါသလား။ ခြေအိတ်ဝတ်တဲ့အခါ ခြေထောက်မှာ အမှတ်အသား ၁ခါ ၂ခါ လောက်ဖြစ်နေရင် ခြေအိတ်ရဲ့မျှောကြိုးက အရမ်းတင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ခြေအိတ်အမှတ်အသားက အမြဲလိုလိုဖြစ်နေရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေပြီဆိုတာ ပြောပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခြေအိတ်အမှတ်အသားကနေပြောပြနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုး ၄ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်။
သင့်ခြေထောက်ယောင်ရမ်းနေသလို ခံစားနေရရင် သင့်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့အရည်တွေ များလာတဲ့အကြောင်းအရင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူ့ဘာသာနာကျင်တာမျိုး မရှိပေမဲ့ ခြေအိတ်ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ သက်တောင့်သက်သာမရှိသလို တင်းကျပ်နေသလို ခြေထောက်ရောင်ရမ်းနေသလိုမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အရည်ဓာတ်တချို့ကို ထိန်းသိမ်းထားရတာကြောင့် (fluid retention) သွေးဖိအားများလာရပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို သွေးပို့ဆောင်ဖို့အတွက် နှလုံးကို အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ ခြေထောက်၊ ခြေဖဝါးမှာ အမြဲလိုလို အရည်ဓာတ်တစ်မျိုးထိန်းထားခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်က တုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ခြေထောက်က သွေးကြောတွေ အားနည်းလာတဲ့အခါ နှလုံးဆီကို သွေးလုံလုံလောက်လောက် ပြန်မပို့နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီနောက်မှာ ခြေထောက်ရဲ့ သွေးကြောလေးတွေမှာသွေးတွေက ပြန်စီးဆင်းလာပြီး နာကျင်တဲ့ရောင်ရမ်းမှု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက သွေးကြောထုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်က ခြေထောက်ဝတ်တဲ့အခါတိုင်း ခြေအိတ်အမှတ်အသားကျန်နေခဲ့ရင် သင့်သွေးပြန်ကြောက သင့်နှလုံးဆီကို သွေးစီးဆင်းအောင် လုပ်လို့မရဖြစ်နေပြီး သွေးကြောထုံးနေတယ်ဆိုတာကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ပြောဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်လုံလုံလောက်လောက်မရရင် သွေးကြောတွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ သွေးကြောတွေက အနီးနားမှာ အရည်ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တည်ဖို့အတွက် ယိုစိမ့်ပေါက်သေးသေးလေးကို ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားရပါတယ်။ ဒီအရည်ဓာတ်စုဆောင်းနိုင်မယ့် နေရာကတော့ ခြေချင်းဝတ်နဲ့ ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတစ်ဝိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ခြေချင်းဝတ်တစ်ဝိုက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ ခြေအိတ်အမှတ်အသားက သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်ကုန်ခန်းနေတယ်ဆိုတာ ညွှန်ပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source; clayduda/ Reddit
ခြေအိတ်ဝတ်တဲ့အခါတိုင်း အမှတ်သားကျန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် သင့်သောက်တဲ့ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးတွေသောက်နေရရင်လည်း ခြေထောက်အောက်ပိုင်း ရောင်ရမ်းတာကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သွေးဖိအားနဲ့ စိတ်ကျရောဂါအတွက် သောက်ရတဲ့ဆေးတွေကလည်း ခြေထောက်ရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကလည်း အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်က ဟော်မုန်းပမာဏကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အရည်ဓာတ်တချို့ကို ထိန်းသိမ်းရတာနဲ့ ခြေထောက်ရောင်ရမ်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ခြေအိတ်ဝတ်တဲ့အခါတိုင်း သင့်ခြေထောက်မှာ ခြေအိတ်အမှတ်အသားကျန်နေရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခြေထောက်ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့နည်းသက်သာသွားစေနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတချို့တော့….
ထိုင်ရင် ခဏခဏပုံစံပြောင်းထိုင်ပေးပါ။ အကြာကြီးထိုင်တာ၊ မတ်တပ်ရပ်တာမျိုးတွေကို ရှောင်ရှားပေးပါ။
ဒေါက်အရမ်းကြီးမြင့်တဲ့ဖိနပ်တွေ စီးမယ့်အစား သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ဖိနပ်တွေကို ရွေးချယ်စီးပါ။
The post ခြေအိတ်အမှတ်အသားကနေပြောတဲ့ ကျန်းမာရေးပြသာနာ၄မျိုး appeared first on MyHealth Myanmar.
MyMedia2020-08-06T08:21:37+06:30August 6th, 2020|MYHEALTH MYANMAR|